Amboary haingana ny tsy fahalavorariana amin'ny hoditra amin'ny photoshop | Famoronana an-tserasera
Manitsy ny tsy fahalavorarian'ny hoditra miaraka amin'ny Photoshop Nivadika ho herin'ny maizina amin'ny indostrian'ny lamaody sy dokam-barotra izy io, nitantana ny famoronana olo-olombelona "tonga lafatra" amin'ny fampiasana ireo karazana fitaovana ireo. Photoshop Izy io dia programa tsara indrindra ho an'ny retouching sary, mamela antsika hanao izay rehetra azontsika eritreretina amin'ny valiny matihanina. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianarantsika tantano ny fitaovana ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny hoditra sy fanesorana ireo kilema (moles, ketrona ...) miaraka amin'ny Photoshop mijanona ny fotoana satria mamela antsika hamelombelona.
Voalohany indrindra dia mila sary misy karazana tsy fahalavorariana amin'ny hoditra isika vao afaka miasa amin'ny Photoshop. Raha vantany vao manana ny sary nosokafanay izahay Photoshop ary nanomboka niasa izahay.
populaire, manokatra ny sary izahay en photoshop.
Raha vao miditra Photoshop manana fitaovana isan-karazany amin'ity karazana asa ity izahay:
Borosy fanasitranana / Fitaovana fanosotra borosy
Ny tsirairay amin'ireo fitaovana ireo dia manolotra fomba fiasa hafa ho antsika, ny tsiambaratelo hahazoana vokatra tsara dia ny milalao amin'izy rehetra rehefa manao retouch photo.
La fitaovana buffer klone Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fakana santionany izay navadika tamin'ny alàlan'ny fanindriana ny fanalahidy alt, ny santionany dia tokony ho eo amin'ny faritra akaiky ny lesoka izay tadiavinay. Tokony hilalao amin'ny opacity (menio ambony) ny fikorianana (menio ambony) sy ny hamafin'ny borosy. Izahay tsikelikely dia mandray santionany ary ampiharinay ny buffer amin'ilay faritra tiana ahitsy.
Safidy iray hafa hanitsiana ny lesoka amin'ny hoditra dia ny fitaovana patch. Ity fitaovana fmitambatra amin'ny fisafidianana, manao a fifantenana ny lesoka tianay ahitsy ary avy eo dia afindrantsika amin'ny faritra akaikin'ny hoditra izay tsy manana karazana fahalavorariana izany. Manoro hevitra anao ny haka santionany eo akaiky eo hialana amin'ny fiovan'ny hazavana sy ny aloka.
Ny fitaovana patch dia manana safidy roa: loharano sy toerana itodiana. La safidy safidy, mamela antsika hanahaka ny faritra nofidintsika, amin'ny teny hafa dia ahafahantsika maka tahaka ny mol, pimple, ketrona ary karazana lesoka hafa amin'ny hoditra. Ny safidy loharano, mamela anao hisafidy sy hanamboatra faritra diso.
Ny borosy miafina miasa tsara mitovy amin'ny buffer clone. Fitaovana ity mamela antsika hanamboatra faritra amin'ny alàlan'ny fandalovana ilay faritra ahitsy, azo atao ihany koa ny manangona santionany toy ny buffer clone ihany.
Mba hahafahana manitsy ireo lesoka rehetra amin'ny hoditra amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia mila mifandimby ny fampiasana azy isika satria samy manana ny fahafaha-manome azy. ny fangatahana amin'ny ora fiasana dia milalao zavatra betsaka amin'ny opacity, mikoriana ary hamafin'ny borosy.
Raha vantany vao mazava ny fiasan'ireo fitaovana ireo, hampiditra andiana sivana izahay ho an'ny hoditra malefaka sy tsy misy kilema. Tsy maintsy manaova safidy ny faritra tiantsika halamina alohan'ny hampiharana ireo sivana ireo.
Mba hampiharana ireo sivana ireo aloha tsy maintsy misafidy ny faritra tiantsika hiasa isika, amin'ity tranga ity dia mifidy ny hoditra amin'ny alàlan'ny Fitaovana sarontava haingana. Ity fomba fisafidianana ity dia ahafahantsika manao borosy, a fifantenana mazava kokoa sy ahazoana aina. Tsotra be ny asany, tsindrio voalohany ilay kisary hampavitrika azy, avy eo misafidy ilay fitaovana borosy ary manomboka manao ny fisafidianana. Vantany vao vita ny fifantenana dia tsy matahotra afa-tsy ny hanome ny sarin-sarontava indray isika, avy eo ovaina ny sary hosodoko. Mba hamaranana dia mankany amin'ny menio ambony (select-invert) isika hamadika ny safidinao ary afaka mampihatra ireo fanovana ihany ao amin'io faritra voafantina io.
Andao ho any menu ambony (sivana) ary mitady ny gaussian blur, Mametaka tsiranoka malefaka mandra-pahazoantsika hoditra madio kokoa.
Mba hamaranana dia mampiditra sivana iray hafa izahay izay mikendry ny hanome ny tena zava-misy kely kokoa ny hoditra saingy tsy mampiseho ireo tsy fahalavorariana izay nesorintsika, noho izany dia hitantsika eo amin'ny menio ambony (sivana) vovoka sy rakotra feo Mametraka sivana malefaka be izahay mandra-pahazoantsika hoditra misy pitsopitsony.
Miankina amin'ny sary tokony hampiharantsika andian-danja isan-karazany amin'ireo fitaovana ampiasaintsika, ka izany no antony ilana hianarana mifehy ireo fitaovana ireo ary avy eo mandavorary ilay teknika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Manitsy ny tsy fahatantesan'ny hoditra amin'ny Photoshop
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny litera sy ny vinyls